I-Red Center Studio
Braitling, Northern Territory, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Brigida
Ifulethi langasese lesitayela se-Studio endaweni ethule engamakhilomitha amathathu ukusuka eDolobheni. Ukungena kwangasese. Ukupholisa nokushisisa ngezinsuku zethu ezishisa ngempela futhi ngezinye izikhathi nobusuku obubandayo ngempela.
Isikhala sinakho konke okudingayo ukuze ulungiselele futhi upheke ukudla ekhishini lesimanje elihlukene, umbhede wosayizi wendlovukazi onendawo yokusebenza ezinikele kanye negumbi lokugezela elibanzi. Uzoba ne-patio yakho yangasese enesango namakhethini ahlukanisa indawo nendlu yonke. Izinja zethu ezi-2, u-Lenny kanye no-Libby, basebenzile ukuthi singangena kanjani phezulu ngaphansi kwamakhethini ukuze bahlole izivakashi zethu ezintsha. 😀
4.62(26 okushiwo abanye)
I-Northside shopping strip iqhele ngekhilomitha, ine-IGA, ibhodlela-o, usokhemisi kanye nesitolo esithengisa izinto ezithengwayo.
We are a family of four. We work, school and live in Alice Springs.
Sithanda ukunikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuphelele, nokho siwumndeni wabantu abane, nezinja ezi-2, futhi ngezinye izikhathi singaba nomsindo omncane. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Ngezimpelaviki, sithanda ukubasa umlilo endaweni yethu yokucisha umlilo ngemva kwendlu.
Sithanda ukunikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuphelele, nokho siwumndeni wabantu abane, nezinja ezi-2, futhi ngezinye izikhathi singaba nomsindo omncane. Sicela ungangabazi ukuxh…